Qisada Beerta Dawladda Noqotay - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA Qisada Beerta Dawladda Noqotay
Qisada Beerta Dawladda Noqotay
Mr. Leonard George Casley wuxu dhashay sanadkii 1925, waxaana uu leeyahay beer weyn oo laga soo saaro Sareenka oo qiyaas ahaan dhan 517 km2 , waxay ku taalla dalka Australia. Bishii April 21, Sanadkii 970 ayay dawladda Australia soo saaratay sharci ay dhibsadeen gancasatada beeralayd ahi kaasi oo culays weyn saarayay ka gacnacsiga sareenka.
Waxaana uu sanadkaasi Leonard George Casley ku dhowaaqay in beertiisu ay ka go’day dalka Austerliay oo ay noqotay dal ka madax banana madaamaaanay waxba uga baahnayn. Leonard George Casley ayaa isla markiiba bilaabay dhisme gidaar dayr adag oo uu ku soo xeerayo beertiis iyo calan u gaar ah dawladiisa cusub. Waxa kale oo uu soo daabacay lacag u gaar ah isagoo isugu yeedhay inuu yahay boqorka dawladda cusub Prince Leonard ama boqor Leonard.
Waxa kale oo uu sheegay in gabadhiisu iyana ay tahay boqorad Princess Shirley. Sanadkii 1977 ayuu iclaamiyay inay la dagaalamayaan dawladda Austerliya , laakiin ciidankii Australia ayaan iyagu danba ka gelin boqor Leonard hadalkiisa.
Muddo yar ka dibna wuxu iclaamiyay inuu guulaystay oo ay ka baqdeen ciidankii Australia, iyadoo wararkiisna lagu soo daabacay dhamaan wargeysyada dalka gudihiisa oo dhan. Islaantiisa Princess Shirley ayaa dhimatay bishii July 7, sanadkii 2013. Laakiin isagu weli wakhtigan waa boqor leonard, iyadoo caasimaduna ay u tahay magaalada Nain, waxaana loo yaqaana gooni u goosadka yar ee Webiga Hutt (Principality of Hutt River Micronation) iyagoo beeralayda kale ee webiguna isaga raacsan yihiin una aqoonsan yihiin boqorkooda. Wikepedia.com
Previous articleMaxaa Dhacaya Haddii Dhulku Joojiyo Wareegiisa?
Next articleSomaliland: Koomiishanka Doorashooyinka Oo Soo Saaray Jadwalka Ololaha Doorashooyinka